Guardiola Oo Liverpool Ku Qabsaday Alcantara, Man United Oo Joojisay Damacii Sancho, Sarr Oo U Gacan Haadiyey Klopp & Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka - Gool24.Net
Guardiola Oo Liverpool Ku Qabsaday Alcantara, Man United Oo Joojisay Damacii Sancho, Sarr Oo U Gacan Haadiyey Klopp & Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka
Manchester City ayaa diyaar u ah inay Liverpool kula tartanto kubbad-sameeyaha reer Spain ee Thiago Alcantara oo ah 29 jir la rumaysan yahay inuu ka dego Anfield, kaddib markii uu diiday inuu Bayern Munich u kordhiyo heshiiska. (SportBild)
Manchester United waxay hakad gelisay raacdadii ay ugu jirtay weeraryahanka reer England ee Jadon Sancho maadaama ay kala aragti duan yihiin Borussia Dortmund. (Mirror)
Qorshihii Manchester United ay ku doonaysay Sancho ayaa halis ugu jira in gebi ahaanba uu burburo, kaddib markii Dortmund ay ku adkaysatay in aanay tanaasul ka samaynayn qiimaha lacageed ee ay ku xidhay iibka 20 jirkan. (Mail)
Juventus waxay isku dayaysaa inay la xidhiidho weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette oo 29 jir ah. (Calciomercato)
Watford waxay diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada laga soo gudbiyo weeraryahanka 22 jirka ah ee reer Senegal ee Ismaila Sarr oo lala xidhiidhinayo Liverpool iyo kooxo kale oo Yurub ah, waxayna ku iibinaysaa £40 milyan oo Gini.
Dhinaca kale, Sarr ayaa u sheegay warbaahinta in ‘qof kastaa uu jecel yahay’ inuu u ciyaaro Liverpool. (Sans Limites)
Roma ayaa damacsan in 23 jirka khadka dhexe uga ciyaara ee reer Guinea ee Amadou Diawara ay Arsenal kaga soo beddelato Lucas Torreira oo 24 jir ah. (Gazzetta dello Sport)
Valencia waxay heegan gelisay kooxaha Premier League iyadoo suuqa soo dhigtay dhamaan ciyaartoygeeda marka laga reebo hal laacib, sababtuna waa inay dheeli-tirto buuggeeda xisaabta. (Marca)
Jack Grealish waxa uu wada-hadallo xaasaasi ah la yeelanayaa Agaasimaha Aston Vi8lla ee Christian Purslow iyadoo uu kasoo laabtay fasaxii la siiyey. Arrintan ayaa timid iyadoo ay 24 jirkan reer England xiisaynayso Manchester United. (Mirror)
Benfica ayaa hoggaaminaysa tartanka loogu jiro difaacii hore ee Tottenham ee Jan Vertonghen, waxaanu 33 jirkan reer Belgium kula biiri karaa naadigaas weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani oo 33 jir ah, lana sheegayo inuu kusii jeedo kooxdaas. (Sun)
Agaasimaha ciyaaraha Lyon ee Juninho ayaa sheegay in xiddiga khadka dhexe ee Houssem Aouar uu ka tegi karayo naadigiisa, iyadoo ay marka horena wada raadinayeen Arsenal, Manchester City iyo Juventus oo doonayay inay helaan 22 jirkan reer France. (Mail)
Paul Pogba oo 27 jir ah ayaa bixiyey ishaaro ah inuu rajaynayo inuu wada-hadallo heshiis kordhin ah la furo kooxdiisa Manchester United marka uu soo dhamaado tartanka Europa League. (Sky Sports)
Everton waxay beddeli karaysaa goolhaye Jordan Pickford oo 26 jir ah, sababtuna waa in tababare Carlo Ancelotti uu dareensan yahay in goolhayaha reer England aan la isku hallayn karayn. (Star)
Arsenal waxay diyaar u tahay inay soo xero-geliso 17 jirka weerarka uga ciyaara Sporting Lisbon ee Joelson Fernandes. Da’yarkan reer Portugal ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay Cristiano Ronaldo-ha cusub, waxaanay Gunners iibkiisa u adeegsan kartaa ciyaartoy iyo lacag kaash ah oo ay isku darto. (Mirror)
Napoli waxay qarka u saaran tahay heshiis ay la gaadho difaaca reer Brazil ee Gabriel Magalhaes oo qiimihiisu yahay £22 milyan oo Gini, waxaana la rumaysan yahay in mar horeba ay heshiis shaqsi ah la gaadhay 22 jirkan u ciyaara Lyon. Napoli waxay qorshaynaysaa in Magalhaes uu u beddelo Kalidou Koulibaly oo ah 29 jir ay lacag badan la dul-taagan tahay Manchester City. (Manchester Evening News)
Tottenham ayaa go’aansatay inay u ogolaato 19 jirrada khadka dhexe ee reer England ee Olivier Skipp iyo Jamie Bowden inay ku baxaan amaah, kaddib markii ay Southampton kala soo wareegtay Pierre-Emile Hojbjerg oo 25 jir ah. (Football Insider)
Atletico Madrid waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa goolhayaha Eibar ee Marko Dmitrovic oo ah 28 jir u dhashay Serbia si uu ugu beddelo Jan Oblak oo ay Chelsea si weyn u doonayso. (Goal)